Shanduko DJ: iyo app yeavo vane mweya weDJ | Linux Vakapindwa muropa
Kana iwe uchibva kuWindows uye wanga uchitsvaga dzimwe nzira dzeVirtual DJ uye zvakafanana zvirongwa zvekusanganisa paLinux saka unofanirwa kuziva Shanduko DJ, programu inosanganisa iyo iwe yaunogona kuve neyako chaiyo DJ tafura yekuita yako ekutanga matanho munyika yemumhanzi. Kunzwa kunge DJ chaiye, uye kugadzira ako masanganiswa kuti ugovane kuburikidza nepodcast kana kungoitira mapato ako ega.
Pamusoro pekukwanisa kuisa kuwanda kwemhedzisiro kumatambo emumhanzi uye gadzira yako masanganiswa, inosanganisirawo zvimwe zvinonakidza maficha sekuwana SoundCloud kuisa zvisikwa zvako kune iro gore uye nekuzvigovana, kuyambuka, kugadziridzwa kwetempo, kusunungura, kuwiriranisa kwetempos, mapoinzi ekuziva, kuona kweBPM, kuenzanisa, nezvimwe.
Shanduko DJ inopawo rusununguko rwekusvika kune dzakasiyana siyana kurira dhatabhesi yakarongeka uye iine kurova, mabara, zvirevo zvekuwedzera kune ako musanganiswa, nezvimwe. Ehe, iwe unogona zvakare kuidyisa iyo nemumhanzi kana kurira kubva kumafaira awakachengeta munharaunda paPC yako.
Todo zvaunoita zvinogona kunyorwa uye inochengetwa mumhando yakasarudzwa. Uye chimiro chayo chakajeka chinonzwisisika, pamusoro pekuratidzira mafungu uye maumbirwo ekuti uone zvine mutsindo mafambiro emimhanzi yauri kuteerera.
Kana iwe uine snap, iwe unogona kuisa iyo Shanduko DJ snap package pane yako distro uchishandisa chishandiso ichi kubva kune terminal. Iri pasuru zita "transitionsdj" isina makotesheni.
Kana iwe uchida Shanduko DJ, unogona kuiisa mune yako distro kubva kune zvimwe zvitoro zveapp, kwainowanikwa, senge muUbuntu software Center. Uyezve enda kune yako website yepamutemo, kwaunowana marinki ekuti utore pasi, asi chinonakidza ndechekuti inowanikwa chete paWindows, macOS neGoogle ChromeOS. Strange, uchifunga kuti iri paSpap Store ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Multimedia » Shanduko DJ: iyo app yeavo vane mweya weDJ